प्रधानमन्त्री बनाईदिनुपर्यो भन्दै बाबुराम राति १ बजे बालुवाटार गएको महेश बस्नेतको खुलासा (भिडिओसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
प्रधानमन्त्री बनाईदिनुपर्यो भन्दै बाबुराम राति १ बजे बालुवाटार गएको महेश बस्नेतको खुलासा (भिडिओसहित)
प्रकाशित मिति : १ जेष्ठ २०७८, शनिबार
काठमाडौं, १ जेठ । नेकपा (एमाले) का सांसद तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले यो दश दिनको अवधिमा जसपाका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग दुई पटक भेटवार्ता गरेको खुलासा गरेका छन् । भट्टराईले राति १ बजे बालुवाटार पुगेर आफूलाई नै प्रधानमन्त्री बनाईदिन आग्रह गरेको उनको दाबी छ ।
उनले भने-“यो दश दिनमा बाबुरामजीले प्रधानमन्त्रीलाई दुई पटक भेट्नुभयो, त्यो पनि राति १ बजे । उहाँले आजको दिनमा राष्टिय सरकार बनाउनुपर्छ, यसको नेतृत्व मैले लिनुपर्छ । आज म ६८ वर्षको भएँ, ७० वर्षसम्म राजनीति गर्ने मेरो चाहना हो । तपाईंले त्यो मेरो लागि पहल गरिदिनुहोस । त्यो तपाईबाहेक अरु कसैले गर्न सक्दैन् । प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवाको हामीले नाडी छाम्यौं भन्नुभयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो अरे भने मेरोविरुद्ध तपाईँ, प्रचण्ड, नारायणकाजी, उपेन्द्रदेखि रामचन्द्रसम्म लाग्नुभाछ, अनि म पनि मेरो विरुद्धको अभियानमा लाग्ने, म चाहीँ १२१ सांसद भएको पार्टीको नेता, महन्थ ठाकुर २०, २१ जनाको प्रतिनिधि, उपेन्द्र यादव पनि १३, १४ जनाको प्रतिनिधि, अनि तपाई चाहीँ कति जनाको प्रतिनिधि ? तपाईँबाहेक को छ तपाईको प्रतिनिधि ?”
आज अपरान्ह प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्ने महत्वकांक्षा रहेपनि त्यो चाहना पूरा हुन नसकेको पनि उनले बताए । उनले वर्तमान सरकारले मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्न धेरै राम्रो भूमिका खेलेको पनि जिकिर गरे ।
काठमाडौं, साउन १६ । नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दै छ । ललितपुरस्थित तुलसीलाल